WeTransfer: chii icho uye chinoshanda sei? | Gadget nhau
WeTransfer: chii icho uye chinoshanda sei?
Tichataura nezvechikumbiro icho chave kuchigadzira nzvimbo pakati peyakakurumbira kwazvo maererano nekufambisa faira uye kuchengetedza gore. Kana iwe uchida kugara uchipfuudza mafaera mahombe kune vaunoshanda navo kana mukuru wako, pane mashoma mashandisirwo pamusika anogona kuenderana WeTransfer. Izvi zvakanaka kunyanya kana iwe uchida kutumira mafaera ayo iwo tsamba haakutenderi iwe kuti ubatanidze. Unogona kuishandisa zvachose mahara uye haina kukumbira iwe kunyorera kuti utumire kana kugamuchira mafaera.
Sezvatakambotaura, WeTransfer parizvino iri pakati peanonyanya kufarirwa mafomu erudzi urwu. Tichazotsanangudza zvakadzama kuti nei application iyi ichikurudzirwa pamusoro pekushandisa seDropbox yekushandisa se cloud storage. Kunyangwe chinonyanya kunakidza chiri pasina mubvunzo kuendesa mafaira pasina kunyoreswa kwepamberi pakati pevashandisi. Verenga pamusoro kuti uone kuti chii WeTransfer uye kuti inoshanda sei.
1 Chii chinonzi WeTransfer?
1.1 Zvakanakira kushandisa WeTransfer
2.1 Nzira yakapusa
3 Shandisa WeTransfer pane nhare
Chii chinonzi WeTransfer?
WeTransfer ipuratifomu yepamhepo inoenderana negore uye yakagadzirirwa kuitira kuti iwe ugone kuchinjisa mhando dzakasiyana dzemafaira kune vamwe vashandisi vakasununguka chose pamusoro penetiweki. Yakave imwe yeanonyanya kuzivikanwa mafomu muchikamu nekuda kwekureruka kwekushandisa, kumhanya kwayo uye, pamusoro pezvose, mutengo wayo 0. Izvo zvinobatsira kutumira mafaira akakura kwazvo kune mumwe kana vanhu vakati wandei panguva imwe chete, uchishandisa chete email account.
Imwe yemabhenefiti ayo akatanhamara anoita kuti ive pamusoro pedzimwe sarudzo ndeyekuti haina kana kukumbira kunyoreswa kwepamberi. Izvo hazvibvunze iye anogamuchira iyo faira kana. Saka isu tinogona kuita mashandiro tisina kunetseka nekuisa zvimisikidzo kana kusanganisa tsamba dzedu nechero rekodhi, ingosarudza iyo faira uye tumira uchishandisa yedu email account.
Zvakanakira kushandisa WeTransfer
Ichi chishandiso hachitibvunze chero rudzi rwekunyoreswa, asi kana tikadaro tinogona kugadzira ako ega maakaundi, ine kunyange ine hurongwa hwekubhadhara matinogona kunakidzwa nesarudzo dzepamberi. Vakakurumbira hapana mubvunzo tumira mafaera anosvika ku20 GB pachinzvimbo che2 GB yatinokwanisa kuendesa mahara.
Iri zano rinotipawo zvimwe zvakanaka zvinobatsira zvemushandisi wepamberi. 100 GB nzvimbo yekuchengetera mugore, akawanda GB kana tichizochengeta mavhidhiyo mazhinji kana Mifananidzo, pamwe nemapurojekiti. Isu tinokwanisa kugadzirisa account yedu nezvinhu zvakasiyana zvepeji kubva uko vamwe vashandisi vanogona kudhawunirodha mafaira edu akagovaniswa. Iyi yekubhadhara chirongwa ine mutengo we € 120 pagore kana € 12 pamwedzi.
Sezvatakakurukura pamusoro apa, hapana kunyoreswa kwepakutanga kunodiwa kuti ushandise WeTransfer yemahara faira yekugovana sevhisi. Nzira iri nyore uye inokurumidza yekushandisa sevhisi iyi yakananga kubva pawebhusaiti.
Kutanga tinowana peji rako webhusaiti yepamutemo kubva kune yedu yatinofarira web browser. Muchiitiko chekutanga, ichatibvunza kana tichida kushandisa iyo yemahara vhezheni kana kana tichida kubvumirana chirongwa chekuwedzera nezvakanaka zvataurwa pamusoro. Isu tinodzvanya kuti ndiendese kuMahara kutumira edu mahombe mahara mahara.
Zvino isu tichazviwana tiri pedu rebasa peji, ine dhizaini inodakadza matinogona chete sarudza sarudzo inowoneka mubhokisi kuruboshwe. Kekutanga nguva patinoishandisa, isu tinofanirwa kubvuma mamiriro uye nekugamuchira chibvumirano (chimwe chinhu chinowanzoitwa mune chero sevhisi yepamhepo). Tinodzvanya kuti tigamuchire nekuenderera mberi.
Ikozvino bhokisi richachinja kuratidza imwe uko iyo kutumira data kwemafaira ako. Isu tinoizadza kuti ienderere mberi.
Tinobaya pabhatani + kuti tiwedzere mafaera atinoda kutumira kubva kukomputa yedu. Kuti tiite izvi, bhurawuza redu rinozovhura iyo faira rekutsvaga kuti uvasarudze. Rangarira kuti neshanduro yemahara saizi yakakura pafaira ndeye 2 GB. Zvakare pamwe neuzere, ndiko kuti, kana tikasarudza akati wandei mafaera, haafanire kupfuure 2 GB pakurema.
Mushure mekuwedzera mafaera atinoda kuendesa, tinodzvanya pane icon yematatu matatu kuti isu tiri kuruboshwe ku sarudza nzira yatinoda kugovana mafaera.
Tine sarudzo mbiri. Kana tikasarudza sarudzo yeemail, WeTransfer Ichachengeta kuisa mafaera pagore rayo uye kana maitiro apera inozotumira email kukero yaunopinda, zvichiratidza kumutori kuti wavatumira mamwe mafaera avanogona kurodha pasi nekungobaya link iri email yavo.
Imwe sarudzo ndeiyi "Batanidza" izvo zvinogadzira chinongedzo chekugovana kuburikidza neyekutumira mameseji senge Teregiramu kana WhatsApp. Ichi chinongedzo chinoendesa zvakare mugashiri kune iyo WeTransfer peji kuti vagokwanisa kurodha mafaera kukombuta yavo ipapo.
Kana isu tiine chirongwa chekubhadhara, Isu tinoshandisa akati wandei sarudzo dzinotibvumidza isu kuvandudza kuchengetedzeka kwemafaira edu uye gadza zuva rekupera kwavo.
Pasina kupokana, sarudzo yeemail ndiyo yakachengeteka uye yakapusa, sezvo zvichizokwana kuisa email kero yemugamiriri pasina zvichienderana nekuwanikwa kwavo kana iko kwekushandisa kwavo mameseji. Tinogona kuwedzera meseji nemirairo kana zvichidikanwa.
Kana mafaera angotumirwa, girafu inozoratidzwa nepesenti yekushanda kwapera. Saka kunyangwe iyi muzana yapera isu hatigone kuvhara iyo webhurawuza, kana kudzima komputa hongu. Iyo yekumisikidza nguva inoenderana neese edu maviri internet kubatana uye kuzadza kweseva.
Kana tapedza tinogamuchira email kukero yataratidza kuti itizivise nezvekupedzwa kwekuchinjisa. Zvakare iye anogamuchira anozogashirawo email inozivisa nezve kugamuchirwa kwemafaira ekurodha pasi. Kana iye anogamuchira atora pasi mafaera, isu tinogashira email zvakare kuzivisa kwekugamuchira uye kurodha padivi ravo.
Shandisa WeTransfer pane nhare
Tine mukana wekutumira mafaera kubva kuApphonephone yedu, sarudzo yakanakisa yeiyi kuisa kunyorera iOS kana Android. Iko mashandiro mushanduro dzemafoni akafanana neayo webhusaiti, isu tinongofanirwa kusarudza iyo faira iyo yatinoda kugovera uye sarudza chishandiso kana chirongwa chatiri kuzotumira chinongedzo chekuburitsa.
Unganidza na WeTransfer
Mukugadziri: WeTransfer BV
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » General » WeTransfer: chii icho uye chinoshanda sei?
Amazon Fire TV Stick (2020), yechinyakare inoramba ichishanda